जब शब्दहरू र उनीहरूको सम्भावित अर्थ संचार गर्दा क्रिएटिव अनलाइन
शब्दहरू र तिनीहरूको सम्भावित अर्थहरू जब सन्देशहरू क्याप्चर गर्न आउँदछ कि तीनिहरू हामीलाई सरल तरीकाले, नजिकबाट, दृश्य मार्ग बिना मार्ग, सन्देशको रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छन्। हाम्रो दिमागमा खेल्नुहोस् र ती हामीलाई सोच्न लगाउँछन्। टाइपोग्राफीको सँधै धेरै दृश्य तौल र महत्त्व भएको छ जब यो आउँदछ सन्देश पठाउनुहोस्सत्य यो हो कि छविहरूसँग पाठको तुलनामा बढी संचारात्मक शक्ति हुन्छ तर धेरै अवसरहरूमा पाठहरू गर्न सक्छन् छवि को भूमिका लिनुहोस् र बिभिन्न ग्राफिक विधिहरूको प्रयोगका लागि धन्यवाद यो टाइपोग्राफीमा यो प्रख्यातता सिर्जना गर्न सम्भव छ।
अर्थोथोग्राफी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ शब्द खेलहरू सिर्जना गर्नुहोस् कि तिनीहरूले खोज्न लुकेका सन्देशहरू र परिणामहरू जुन दर्शकलाई मायालु देखाउँछन् तर अझै सन्देशमा उपस्थित छन्। यसमा पोस्ट हामी ग्राफिक्सको श्रृंखला हेर्न जाँदैछौं जहाँ टाइपोग्राफी नायक हो र सन्देश भनेको त्यो खेल हो जुन रिसिभरहरूसँग त्यो सम्बन्ध सिर्जना गर्न खोज्छ।
पहिलो टाईपोग्राफिक खेल जुन हामीले देखाउन जाँदैछौं को विचारमा केन्द्रित छ मानव त्रुटि देखाउनुहोस्, त्यो असिद्धता जसले उसलाई के बनाउँछ, एक त्रुटिपूर्ण प्राणी हो।
सबै ग्राफहरू जुन हामी कल्पना गर्न लाग्दै छौं एक छ समान डिजाइन लाइन समान डिजाइनमा सबै डिजाइनहरू सामेल गर्न सक्षम हुन, यसैले कार्यको एकल लाइन प्राप्त गर्ने। टाइपोग्राफीको महत्त्वलाई आदर गर्नुहोस् र ठाउँ ठाउँ अधिक कन्ट्रास्टको लागि सेतो।
शब्द "मानव"aसंग प्रदर्शित हुन्छ गलत हिज्जे क्रमशः त्रुटिपूर्ण विचारको प्रतिनिधित्व गर्न। माध्यमिक तरीकामा, धेरै गलत गुणहरू थप गलत हिज्जेसँग थपियो।
पोडेमोस मानिसहरूलाई मद्दत गर्नुहोस् वा हामी गर्न सक्छौं आफैलाई सहयोग गर्नुहोस्धेरै चोटि दुबै चीजहरू सँगै जान्छन् जुन निम्न ग्राफमा देख्न सकिन्छ।
शब्दहरू प्रायः डबल संरचनाधेरै चोटि केहि शब्दहरू अर्को शब्दमा लुकेका हुन्छन् र जब सम्म हामी तिनीहरूलाई फेला पार्दैनौं अदृश्य हुन्छन्। निम्न ग्राफले हामीलाई दुई देखाउँदछ संयुक्त लिंग खैर, दुबै समान छन्, के तपाई यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ?
यी अन्तिम ग्राफहरूमा हामी कुनै पनि जानकारी देखाउने छैनौं ताकि प्रत्येक प्रयोगकर्ताले यसलाई स्वतन्त्र रूपमा डेसिफर गर्न प्रयास गर्न सक्दछ।
के तपाईं यी भर्खरका ग्राफहरू बुझाउने हिम्मत गर्नुहुन्छ?
यसमा टिप्पणी गरेर तपाईंको विचार साझा गर्नुहोस् पोस्ट।
हामीले देख्यौं कि ती प्राप्त गर्न सकिन्छ आकर्षक ग्राफिक्स मुख्य पात्रको रूपमा अवधारणा प्रयोग गरेर, एक चाखलाग्दो र रचनात्मक तरिका सन्देश अनुवाद गर्नुहोस् केहि सरल शब्दहरूको साथ सरल शब्दहरूको साथ जुन तिनीहरूको अर्थसँग खेल्दछ र हाम्रो दिमागमा जब उनीहरूलाई सम्झन्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » शब्दहरू र तिनीहरूको सम्भावित अर्थहरू